ကြေးဝါကိုဖြောင့်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးအဝတ်အစားအစမ်းဝတ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း - တရုတ်စက်ရုံ - Cixi Wenap အင်တာနေရှင်နယ်ထရေးဒင်း Co. , Ltd မှ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > metallic Fittings > ကြေးဝါကိုဖြောင့်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးအဝတ်အစားအစမ်းဝတ်
ကျနော်တို့ကြေးဝါကိုပိုက်လျောက်ပတ်နို့သီးခေါင်း, ကြေးနီနားချင်းဆက်မှီနှင့်ကြေးဝါ connector ကိုofÂသင့်ရဲ့ drawings သို့, နမူနာသို့မဟုတ်ဖော်ပြချက်မှ acorrding pruduce နိုင်ပါတယ်။ နွေးနွေးထွေးထွေးသင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်မှကြိုဆိုပါ၏! ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူဝန်ဆောင်မှုပေးချင်ပါတယ်။
တစ်ဦးနားချင်းဆက်မှီဆင်တူတစ်ဦးကပြည်ထောင်စု, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသို့မဟုတ်ကရိယာကိုအစားထိုးဘို့ပိုက်များ၏အဆင်ပြေအနာဂတ်အဆက်ဖြုတ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင် (Threaded သစ်သားဆက်စရာအဘို့) အ solvent ဂဟေလိုအပ်နားချင်းဆက်မှီ, ဂဟေ, ဒါမှမဟုတ်လည်ပတ်မတူဘဲတစ်သမဂ္ဂ, အကြိမ်ပေါင်းများစွာလွယ်ကူသောဆက်သွယ်မှုများနှင့်အဆက်ဖြုတ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ တစ်ဦးခွံမာသီး, အမျိုးသမီးအဆုံးနှင့်အထီးအဆုံး: ဒါဟာသုံးပိုင်းပါဝင်ပါသည်။ အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားကြီးစွန်းပူးပေါင်းနေကြတယ်သောအခါ, ခွံမာသီးကိုအတူတကွတင်းကျပ်စွာနှစ်ခုကြီးစွန်းကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ပူးတွဲတော်မူ၏။ သမဂ္ဂများအလွန်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအနားကွပ် connector ကိုအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။
တန်းတူ / လျှော့ချ (customsized)
ဆဋ္ဌဂံ / ပတ်ပတ်လည် (customsized)
Poly အိတ်, အတွင်းစိတ် box ကိုပြင်စက္ဏူထူ
ငွေပေးချေမှုပြီးနောက် 35 ရက်အတွင်းတင်ပို့
ကြေးဝါဖြောင့်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးအဝတ်အစားအစမ်းဝတ်၏ကုန်ပစ္စည်း Feature ကိုများနှင့်လျှောက်လွှာ
1. အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု strickly: ပစ္စည်းထိန်းချုပ်ရေး, Mach အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ,, In-လာမယ့်ပစ္စည်းထိန်းချုပ်ရေး, စုဝေးအရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးခြင်း, ယိုစိမ့် Tese နှင့်နောက်ဆုံးစစ်ဆေးရေး shiping မတိုင်မီ
3. ဖောက်သည်အညီâ€™s ကိုလိုအပ်ချက်များကို။
သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း:Sea transportation and air transportation or according to customerâ€™s requirements.
hot Tags:: ကြေးဝါကိုဖြောင့်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးအဝတ်အစားအစမ်းဝတ်, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, လက်ကားတရုတ်ခုနှစ်တွင်ဖန်ဆင်းစက်ရုံ, ဝယ်, ဖောက်သည်စတော့အိတ်များတွင်အစုလိုက်, စျေး, Pricelist, စျေးနှုန်း, High Quality
ကြေးဝါကဲ့သို့၎င်း Pneumatic လမျးဖွောငျ့ Threadedကြေးဝါကိုဖြောင့်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး